Global Voices teny Malagasy » Oganda: Navotsotra Ny Mpanoratra Iray Mpanohitra An’i Museveni Dimy Andro Taty Aoriana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Oktobra 2011 12:35 GMT 1	 · Mpanoratra Rosebell Kagumire Nandika miora
Sokajy: Afrika Mainty, Oganda, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Politika, Zon'olombelona
Navoakan'ny  governemanta Ogande ny mpanoratra boky iray izay nampidirina am-ponja nandritra ny dimy andro ary tsy afaka niresaka na tamin'ny mpisolovava azy na tamin'ny fianakaviany. Ilay bokikely fanta-daza an'i Vincent Nzaramba izay antsoina hoe People Power, Battle the Mighty General ( Herim-bahoaka, Ady amin'ilay Jeneraly Tsy Refesi-mandidy) dia niantso fanonganam-panjakana sy fanovàna ao amin'ny firenena, nanosika ity mpitolona tsy be mpahalala ity hitodihan'ny hazavan'ny jiroben'ny rehetra.
Mpampiasa aterineto maro no nifampizara ny vaovao tamin'ny alàlan'ireo vohikalan'ny media sosialy hatramin'ny nisamboran'ny mpitandro filaminana an'i Nzaramba ny Sabotsy 17 Septambra 2011. Nandritra ny fisamborana azy dia dika 200-n'ilay boky no nogiazan'ny mpitandro filaminana.
Lehiben'ny Anjerimanontolo Makerere izay antitra indrindra any Oganda teo aloha i Nzaramba; nirotsaka ho fidiana tamin'ny fifidianana parlemanta izy ny Febroary ary mampiodina bilaogy  izay manasongadina ny fijeriny ny fomba hanaovana fanovàna tsy misy herisetra. Anatin'ny bokiny i Nzaramba dia miantso fikomiana tahaka ireo izay niseho tany amin'ireo firenenan'i Afrika Avaratra tamin'ny voalohandohan'ity taona ity ary nahitàna ny fianjeran'ny fitondrana tany Tonisia , Ejipta  ary Libia .
Ny fonon'ilay boky: Herim-bahoaka, Ady amin'ilay Jeneraly Tsy Refesi-mandidy
Niaina fihetsiketsehina  i Oganda nandritra ireo volana vitsy lasa noho ny fiakaran'ny vidim-piainana izay nahavoatifitra sy nahafaty olona folo tany amin'ny araben'i Kampala ny Aprily sy Mey. Nohasarotin'ny goverenemanta ny fahafahan'ireo vondrona mpanohitra hanao fitokonana, ny fihetsiketsehana farany teo dia ny fanoherana an'i Gaddafii.
Ny bokin'i Nzaramba no farany nanintona ny mason'ny governemanta. Tamin'ny taon-dasa ireo manam-pahefana dia niezaka ny hanakana ny bokin'ny Dr Olive Kobusingye, The Correct Line (Ny Tsipika Tena Izy) boky iray hafa mpanohitra an'i Museveni. Efa nanomboka tamin'ny 1986 ny Filoha Museveni no teo amin'ny fitondrana ary ireo adihevitra momba ny fiainana aorian'i Museveni’ dia samy hita na any amin'ny media nasionaly na any anatin'ireo sehatra fiadian-kevitra ao anaty aterineto.
Ireo fanehoan-kevitra tao anaty aterineto
Nisy vondrona  iray noforonina mba hangatahana ny famotsorana an'i Vincent Nzaramba. Ny sasany tao amin'ilay pejin'ny vondrona dia niantso azy ho gadran'ny fanehoan-kevitra ary mihoatra ny 800 ireo olona nandray anjara tamin'ny fanohanana azy.
Morris P'LORENG'A  dia mitsikera:
Rehefa mamarana ny andro isika, tokony tsy hanadino na oviana na oviana an'i Vincent Nzaramba izay mety iharan'ny fampijaliana ara-batana sy ara-tsaina goavana eo am-pelatanan'ny fitondran'i NRM mpamono olona ( NRM = National Resistance Movement)
James William Mugeni  dia manondro fa efa hita any ivelan'ilay tanàna izay nitrangan'ny fisamborana ireo dika anaty aterineto amin'ilay boky:
Mahaliana ny mahita fa efa azo jerena ao anaty aterineto manerana ny firenena ireo dikan'ilay boky .”VITA ILAY ZALAHY”
Steven Mukuma  dia manipika ny zavatra nolazain'ny Minisitry ny Fampahalalam-baovao tamin'ny mpanao gazety – fa nampiasa hery diso tafahoatra ny mpitandro filaminana tamin'ny fisamborana an'i Nzaramba:
Eny, mihevitra aho fa nisy fampiasana hery diso tafahoatra tamin'i vincent araka ny fanamarihan'i karooro okurut omaly. Tsy mila mamerina ny zavatra noteneniny aho. Koa mba afaka hisitraka ny zony araka ny lalampanorenana sy ireo lalànan'ny fitsarana ara-dalàna tahaka ny olom-pirenena hafa ve izy?
Enx Nux  dia miteny fa mampibaribary ny fahalemen'ny governemanta fotsiny ilay fisamborana:
Mampalahelo saingy tsara ihany amin'ny lafiny iray satria io ihany no làlana ahafahan'ny governemanta mampiharihary ny fahalemeny ka mahatonga azy ireo hiantso antsika hampahery azy ireo amin'ny vesatra lanjainy. Mitsiky foana aho isanandro satria manohy nampiharihary ny fahalemeny ny governemanta nefa manjavona foana izany tsiky izany raha tsy misy na iray aza vonona hiray hananganana Oganda tokana. Ndeha hifantoka & hitazona ny fahavitrihantsika ho ambony mba hamonjena ity firenena ity.
Manontany tena i Nina Mbabazi  ny amin'ny fomba hitazonana ho mitombina ny fiampangàna an'i Nzaramba ho nandrisika hanao herisetra :
I Nzaramba Vincent  izay vao avy navoaka ny fonja rehefa nandoa onitra, dia nanoratra boky izay naparitaky ny olona sasany ao amin'ny facebook ary hitako mazava fa mankahàla ny “M7s guts” izy. Nefa namporisika hanao herisetra? Moa ve izy nitaky ny fahafatesan'iza na iza araka ny fomban'i Al Shabaab? Ity angamba no paikanà dokam-barotra tsara indrindra ho an'ny bokiny satria maro amintsika no mety tsy mbola namaky izany.
Ilay Ogandey mpanao gazety, Don Wanyama,  dia manontany tena ao amin'ny pejy Facebook-ny ny mahatonga ny governemanta ho sorena noho ireo boky nomena maimaim-poana miarkaka amin'ny kolontsaina mahantran'ny firenena raha resaka famakiam-boky; na eo aza anefa izany, hita ao amin'ny aterineto  io boky io izay manamora ny fahafahan'ireo mpampiasa media sosialy miditra sy mamaky izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/10/12/22900/
 Niaina fihetsiketsehina: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/uganda-walk-to-work-protests/
 Enx Nux : http://www.facebook.com/groups/249552465080830/?view=permalink&id=249770971725646
 Don Wanyama,: http://www.facebook.com/don.wanyama/posts/10150309152234144
 hita ao amin'ny aterineto: http://www.scribd.com/doc/65629394/Untitled#source:facebook